Web hosting Chakavanzika Chakavanzika (WHSR): Ongororo, Kuenzanisa & Matipi
Tsvaga Best Web Host
Zvechokwadi kugadziriswa nekuongororwa kwakavakwa pa
kutsvakurudza zvakazvimirira & zvakaoma data.
Yedu Yakanaka Webhu Inotakura Mapiki
Enzanisa & Sarudza
Yakanakisa Isina Webhu Yekutapa
A2 HostingKugoverwa kunowanotanga kunotanga pa $ 3.92 / mo.
BlueHostKugoverwa kunowanotanga kunotanga pa $ 2.95 / mo.
GreenGeeksEco-friendly hosting inotanga pa $ 2.95 / mo.
HostgatorCloud hosting inotanga ku $ 4.95 / mo.
HostingerKugoverwa kunowanotanga kunotanga pa $ 0.80 / mo.
HostPapaKubatanidzwa kweCanada kunotanga pa $ 3.95 / mo.
... Ese Anokoka maongororo
InMotion HostingKugoverwa kunowanotanga kunotanga pa $ 3.99 / mo.
InterServerKugoverwa kugoverwa pa $ 5 / mo nokuda kwehupenyu.
Scala HostingSPanel VPS yekubata inotanga pa $ 13.95 / mo.
SiteGroundKugoverwa kunowanotanga kunotanga pa $ 3.95 / mo.
TMDHostingKugoverwa kunowanotanga kunotanga pa $ 2.95 / mo.
WP EngineKutungamirirwa neWP kubata pa $ 29 / mo.
Web Host Basics Kuti web hosting uye domain domain rinoshanda sei.
Bata A Webhusaiti Nzira mbiri dzekugamuchira webhusaiti inoshanda.
Sarudza Webhu Yekutambira 16-point yekutarisa yekutambira vatengi.
Dzidza Setup SSL Enzanisa uye tenga SSL yakachipa kubva kuvimbika CA.
Tanga A Blog Nhanho-nhanho anotanga mutungamiri kutanga bhurocha.
Kurisa Blog yako 15 nzira dzekusimudzira uye kukura blog rako.
... Zvese Zvinyorwa
VPS Hosting Guide VPS inoshanda sei? Iko nguva yekushandura?
Shandura Web Host Nzira yekutsvaga mawebsite ako kune imwe nharaunda.
Web Hosting Cost Iwe unofanirwa kubhadhara mari yakawanda sei nekuda kwekubatwa kwewebhu?
Ita A Website Nzira nhatu dziri nyore dzekugadzira yako webhusaiti.
Mashandisiro anoita VPN Ndeipi iyo VPN inoshanda uye unoda imwe?
Tsvaga Best VPN Ungasarudza uye uye kupi yekutenga VPN?
WHSR Web Host SpyRatidza infra uye tech kumashure chero webhusaiti.
WHSR Uptime CheckerChengokurumidza kana webhusaiti iri pasi.
Web Host Comparison Enzanisa kusvika kuW3 webhupu panguva imwe chete.
Web Hosting Secret Inoratidzwa
Ratidza zvivakwa uye webhu ruzivo ruzivo rwewebsite.
Kugamuchira Webhusaiti Yekutanga Nguva?
Kwekugamuchira kwedu uye webhusaiti kutungamira kwakafanana nemepu - inongobatsira chete kana iwe uchiziva kwauri kuenda.
Iwe unofanirwa kunzwisisa zvaunoda kubva kubasa rebhubhu usati wasarudza imwe.
Pamusoro pezvitsva, mutemo usina-brainer ndeyekuti ugare uchitanga zvishoma neurongwa hwekugadzirisa zvakadai sekugoverana kwekugovera. Kune vamwe vashandisi vakakurumbira, nzvimbo yako yekushandiswa inokosha - izvi zvinoreva kuti unoda kugadzikana uye kugadziriswa kugadzirisa sarudzo.
Nhanho-nhanho nhanho kutungamira yako yekutanga webhusaiti
Iro web hosting uye domain domain rinoshanda
Kwokutenga yako yekutanga domain domain
Nzira yekusarudza mukana wekugamuchira mupiro
Nzira yekufambisa sei nzvimbo yako kune imwe nzvimbo yepa web host
Nzira yekutenga nekuisa SSL cheti
Best inoshandiswa kubhadhara basa pasi pe $ 5 / mo
Best email yekubata masevhisi
Kunyanya kugadzirira zvebhizimisi duku / midzi
Tsvaga Yakanyanya Kubata kune Yako Webhusaiti
Hazvikwanisi kusarudza kuti ndiani webhupu yekuenda nayo?
Tinosayina uye tinoedza web hosting services kuitira kuti iwe unogona kudonha kuti uvatevere uye usarudze mhinduro dzakanakisisa - Ona mazita akazara emhinduro dzedu pano.
Shandisa shanduro yedu yekufananidza kuenzanisa kuburikidza nehuwandu hwemakambani ekugadzirisa. Iwe unogona kufananidza nekambani ye3 yekuunganidza panguva imwechete uye inonyora zvose zvese zvaunoda zvakadai sekuenzanisa kwedu, mutengo, zvinhu zvinokosha, uyewo nekukurumidza kushandiswa nekuregererwa kwemari.
Wona Hwegumi Wedu Akanaka Webhu Inotakura Mapiki
Kuenzanisa Kushandiswa Nesimba
WHSR Web Host Comparison Tool
Enzanisa: BlueHost vs InMotion Hosting
Enzanisa: BlueHost vs SiteGround
Enzanisa: Hostgator vs SiteGround
Chidzidzo cheMusika: Ndezvipi Zvakawanda Zvokubhadhara Kwekuchengetedzwa Kwewebhu?
Kubata mitengo yakashandura zvikuru kudarika 10 yekupedzisira kune makore 15.
Pakuvamba kwe2000, imwe $ 8.95 / mo pakapetwa nezvinhu zvinokosha zvaifungidzirwa zvisingabatsiri. Zvadaro mutengo wakaderera ku $ 7.95 / mo, uye $ 6.95 / mo, $ 5.95 / mo, uye pasi.
Isu takadzidza misika yemakambani echangobva kuwanikwa uye takawana kuti, pavhareji ...
Nhamba yepamusoro inobatanidzwa purogiramu inodhura $ 3.40 / mo pakusayina & $ 4.94 / mo munguva yezvekuvandudzwa,
Purogiramu yepamusoro VPS chirongwa chinodhura $ 17.20 / mo pakunyoresa & $ 20 / mo munguva yezvekuvandudzwa, uye
Izvo zvakakwirira zvakagoverwa uye VPS zvirongwa zvekugadzirira hazvingabhadhari kudarika $ 25 / mo ne $ 170.
Kana ukashamisika kuti iwe unofanira kubhadhara zvakadini nokuda kwekubatira web ...
Verenga Shanduro Yedu muIndaneti Kubata Mari
Webhu Hubata Discounts & Madhiri
Coupon Code: 10YEarsGREEN Kune avo kusaina kumusoro GreenGeeks kekutanga, shandisa iyi coupon kodhi kuchengetedza inosvika 70% pane yakagovana yekugovana (tinya apa kuraira). Disclosed: WHSR inogamuchira mari yekufambisa…
Coupon Code: WHSRPENNY Anofarira Interserver yakagoverwa yekubata? Iwe unogona ikozvino kuvayedza nekuda kweiyo $ 0.01 chete pamwedzi neye promo kodhi "WHSRPENNY" (tinya apa kuraira). Kuratidza: WHSR…
GlowHost Coupon Makodhi
Coupon Code: WHSR30 Kune avo vari kutenga kutenga kwavo kekutanga kuGlowHost, shandisa iyi yekudzikisa kodhi kuti uwane 30% kubviswa pane GlowHost webhu rekutonga zvirongwa (tinya apa kuraira). Kuzivisa: WHSR inogamuchira…
Zvimwe paWeb Hosting
Chokwadi iCloud Hosting yakafanana neDigital Ocean Cheaper? Kupinza Kwakadzika muKutakura Mitengo
Cloud Komputa yakangokwenenzverwa zvakanyanya makore gumi apfuura kana zvakadaro. Nehunyanzvi zvakadaro, pfungwa yave iripo kwenguva yakareba. Izwi rekuti 'Cloud' rinonyanya kureva Ref…
10 Cheaper Dzimwe nzira dzeSiteGround Hosting
SiteGround ine mukurumbira mukurumbira mukubatwa kwewebhu asi munguva pfupi yapfuura mitengo yemikoto yakaita kuti vamwe vatarise kune dzimwe nzira dzinodhura. Nezvirongwa iye zvino kutanga padyo nekaviri mumutengo, vashandisi vanogona c ...
Ndekupi Kwaungagamuchira Yako Inotevera Project? Best Django yekubata masevhisi
Django idiki yezvinhu zvakashata nekuti niche sezvazviri, rudo rwemhando iyi runoratidzika kunge ruchabvaruka pakati pevaviri vakwikwidzi vanonakidza - United States neRussia. Zvakadaro, pane zvakawanda zvekufarira zve dev ...
7 GoDaddy Alternatives yeDomain & Hosting
GoDaddy inogona kunge iri 'hombe baba' yekubata masevhisi asi chikuru hachisi chakanyanya kunaka. Yakagadzwa muna 1997 saJomax Technologies, iyi Arizona-yakagadziriswa behemoth nhasi inoshanda anopfuura 18 miriyoni…
Yakanakisisa Cloud Hosting Provider mu2020
Iyo yakanakisa "Cloud" yekupa vatengi nhasi vanopa vashandisi kupfuura kungounganidza chete kwezviwanikwa. Vanowanzozvisiyanisa pachavo mumusika wakatoguta kare. Newebhu services becomin…
Yakanakisisa VPS Yekutora Vanopa Vanofunga Nezve (2020)
VPS Kubata zvirongwa ndiwo masimba emagetsi eingi webhu revatambi vanopa revatambi mhinduro. Ndidzo nzvimbo inotapira yeshanduko yevashandisi vazhinji uyezve, ndipo pavanogumira vazhinji kana vatora ...
Plesk vs cPanel: Enzanisa neyenyika Yakakurumbira Webhu Inotonga Panel
Kudzora mapaneru kwakakosha kudaro chikamu chewebsite yedu yekubatira ruzivo uye zvakadaro kwete vazhinji vedu tinovapa kufunga kwakawanda. Semuenzaniso, waiziva here kuti maviri anozivikanwa Webhu Kubata Kudzora Panels…
Iyo Yakanyanya Yemahara Webhu Saiti Siti (2020)
* Kugadziriswa: Rondedzero yemutengo uye tafura yekuenzanisa yakagadziridzwa. Isu tese tinoda maFreebies uye hazvifanire kushamisika kuti kunyangwe muwebhu webhu kune matani emahara kana iwe uchiziva kwekutarisa. Kwete…
Nyaya Yokuda kuziva ye Absolutely Free Domain Name
Nezita rinopfuura mamiriyoni emamiriyoni eA348 akanyoreswa sekupedzisira 2018, mazita emadunhu ari kutengesa kutengesa zvinhu. Muzvokwadi, pane kuve kwakakosha kudai iyo Internet Corporation yeMazita akanyorwa ...
Kuvaka Yakabudirira Blog
Maitiro ekugadzira yako blog yekutanga uchishandisa WordPress? Maitiro ekuita mari yakawanda blogging? Maitiro ekushingairira kukura yako blog traffic? Ndeapi maturusi ebhurogi akakodzera kushandisa?
Dzidza zvese - kubva pane zvekutanga kusvika kumablog ekushambadzira tatics kubva kumaproblogger anga "ave aripo uye akaita izvo".
Maitiro Ekutanga Bhulogi muna 2020
WHSR Kubhuroka Matipi
Zvaungaita 8,000 Blog Comments: A Case Study
Munguva pfupi ndakagamuchira mhinduro yangu ye8,000th paBlogging From Paradise. Mushure mekurova ichi chinonyanya kukosha ini ndinoda kugovera chiitiko chekutaura zvingaita sei kuwana 8,000 mazwi pablogi yako zvakare. Sei uchida kutanga ...
Mazita eBlog Blog Mazano: Mazano Okusarudza Zita Rakakwana KwaBlog Yako
Chii chakanyanya kukuvadza iyo yose inosangana neBrougger blogger? Kuedza kusarudza zita reblog yavo. Kunyora ibhuku kunogona kunge kwakaoma, kunyanya kana iwe uri mutsva kubhogi rese nekugadzira zvinhu. ...
Best Blogging Practices For Blogs Isingabatsiri
A blog inopfuura kungoita zvinyorwa uye kubudisa mabhii pamusoro pekambani yako. Ichokwadi, yakashandiswa zvakakodzera, mabhogi ekusava nehupfumi anogona kuva chinhu chakakosha chekusimbisa kusimba kwema ...
Kumhanyisa paInternet Venture
Bhizinesi rega rega rinoda chaiyo online - Unoda nzvimbo yepamhepo yekuvaka bhizinesi rako, kutengesa zvigadzirwa kana kuwana zita rako kunze uko.
Iwe haufaniri kuva tech geek kana chirongwa.
Tevera nzira yakarurama. Sarudza mahwendefa akakodzera. Shandisa kodzero yekubudisa zvishandiso. Iwe uchava 100% yakanaka.
Nzira Nhatu dzeKugadzira Webhusaiti / 50 Pamhepo Bhizinesi Pfungwa
Yekupedzisira Webhu Bhizinesi & Budiriro Inotungamira
Chaturbate uye gumi Mamwe Akavakwa-ane Django Websites
Chaturbate inzvimbo yakakurumbira inozivikanwa, asi pane chero iwe wakambozvibvunza kuti tekinoroji inoifambisa nayo? Mushure mezvose, iyo inokwanisa kubata zviuru zvezviitiko zvehupenyu chaihwo kune vazhinji vateereri pane chero kupihwa ...
Kuwedzera Webhusaiti Speed ​​Ne Cloudflare (Rakareruka Setup Chinyorwa)
Chii chinonzi Cloudflare? Cloudflare inonyanyo kuzivikanwa kune yayo Dhijitiro Yekutumira Network (CDN). Izvi zvinobatsira mawebhusaiti kudzikisa peji rewebhu kurodha kumhanya. Iyo nzira yekutanga inoitwa iri kuburikidza ne caching. Nekudaro, Cl…
CyberGhost Pros: Zvandinoda nezveCyberGhost 1. Rumania Kunze kweiyo 14-Eyes Jurisdiction Jurisdiction ndechimwe chezvinhu zvakakosha muVPN mushandi webasa. Kazhinji, isu tine hanya nazvo ...
7 Zvishandiso Zvekunetseka Kuyedza Yako Webhusaiti Yekutakura Trafiki
Kunyangwe iyo novice yakanyanya pakati pevaridzi vewebsite pane imwe nguva kana zvimwe zvakaedzwa maitiro avo ewebhusaiti. Nekudaro, mazhinji emayedzo aya anowanzo tarisa kurodha nekumhanyisa kana ruzivo rwevashandisi. Asi chii…
Kuzivikanwa Sei Host Kuparadzira Enterprise-mhando Services kune Avhareji Yemutengi
KnownHost yakavambwa mu2006 uye panguva iyoyo yaive yakanyanya kutaridzika neVirtual Private Server (VPS) uye server co-nzvimbo bhizinesi. Izvo zvaingova makore maviri apfuura kuti KnownHost CEO Justin Sau…
Kuchengeta Ziso paSiti Kuvimbika neRutsva
Kuchava, kuvandudza neFreshworks, iri nyore kwazvo kuongorora webhusaiti iyo inotanga pamutengo unonakidza - wemahara. Muchidimbu mashoma, zvinokubvumira kuti uzvionere wega webs…
Kuchengetedza Yako yepamhepo Yakavanzika
Muzera razvino Ruzivo, data ndiyo mari itsva. Yako yedata data yave imwe yeinokosha imwe inowanikwa online nhasi uye chero chero chinhu, inogona kubiwa nekutengeswa kana kuchinjana.
Makambani ari kuyedza kuunganidza dhata yakawanda kune vashandisi vavo kusvika padanho rekuti iri kunyanyisa kushomeka apo nyika dzakakamurwa pamaitiro ekugadzirisa mamiriro ezvinhu.
Saka chii chatingaite isu pachedu kuita kuchengetedza zvakavanzika zvedu online? Mhinduro inotitungamira kuVPNs.
Mashandisiro anoita VPN / Wepamusoro gumi VPN Services Yekufunga nezvayo
Zvimwe Zvepamhepo Zvekuchengetedzwa Kwepamoyo
Zvese Zvaunoda Kuziva Nezve Cloudflare (uye Zvimwe Zvausingade)
Cloudflare inonyanyo kuzivikanwa seCloud Delivery Network (CDN). Nhasi zvave zvakapfuura zvakapfuura izvo uye zvinopa huwandu hwemasevhisi zvakanyanya kufukidza netiweki uye kuchengetedzeka. Basa ravo rakati: Kubatsira bu…
NordLynx Inowedzera NordVPN Speed ​​Nekukurumidza
NordLynx iproocol neNordVPN yakavakirwa adapterly kutenderera neWireGuard. Iyo yekupedzisira yakaiswa nevazhinji vekutanga testers kuti vave chizvarwa chinotevera mune yekutaurirana protocol. Nekudaro, sezvo WireGuard i…
Chenjerai: Kwete All VPN kuti Works muna China ndivo Same
Pave nemakumi mana emakore kubvira China yazarura hupfumi hwayo. Pakati peiyo nguva yenguva, nyika yakatambanudza mapapiro ayo pamusoro pezvinhu zvese kubva pakutsvaga mafuta kune tekinoroji. Panguva imwe chete zvakadaro,…
ExpressVPN vs NordVPN: Ndeipi VPN iri Kunze Kutenga?
Munyika yeVirtual yakavanzika Networks, kune akawanda mazita anozivikanwa. Hapana mumwe akakurumbira zvimwe, kupfuura NordVPN uye ExpressVPN. Idzi mbiri behemoth dzakatekesesa pamusoro pemunda kwemakore. Kune avo ...
Vari VPN zviri Pamutemo here? Nyika gumi Dziri Kurambidza Kushandiswa kweVPN
Zvinogona kuuya sekushamisika kune vamwe, asi Virtual Private Networks (VPN) inorambidzwa chaizvo mune dzimwe nyika. Kunyangwe runyorwa rwenyika dzinorambidza zvachose kushandiswa kweVPN ipfupi, pane izvo…
Mhando yeInficito Yakatsanangurwa: Inoita Kuti Iwe Usazivikanwe?
Incognito Mode ndeyekurongedza iyo inodzivirira yako kuvhurika nhoroondo kubva kuchengetwa. Ipo vashandisi vazhinji vanobatanidza incompito mode chete neyakavanzika yekuvhurika chimiro cheGoogle Chrome, iyo yakawanda genera…
Vanhu Vanotevera WHSR
WHSR inobudisa zvinyorwa uye inovandudza zvishandiso zvevashandisi vanobatsira mukugadzirisa nekuvaka webhusaiti.
Misika yekutambira yakazara nezviuru zvevashandi, imwe neimwe ine zvakasiyana siyana. Chinangwa chedu ndechekubvisa utsi hwekusimbisa uye kukuendesa kumucheto wehutano uye kukoshesa makambani anopa.
Dzidza Zvakawanda Nezve WHSR
WebHostingSecretRevealed (WHSR) inoburitsa zvinyorwa uye inogadzira zvishandiso zvevashandisi vanobatsira mukubata uye kuvaka webhusaiti.
About . Glossary . turikira . Disclaimer
Titevereyi: Facebook . Twitter
Nzvimbo Inoishandiswa na
2 Jalan SCI 6/3 Swayway City Ipoh
Zvakare Nzvimbo Dzedu: HostScore . Vakai Izvi
Webhusaiti Zvishandiso & Matipi
Best Web Site Builders for Small Business
Plesk vs cPanel: Enzanisa Hosting Kudzora Panel
Chokwadi Pamusoro Pokusagadzikana Kusingagumi
Webhusaiti Muvaki: Wix / Weebly
Chitoro Vavaki: BigCommerce / Shopify
Kuchengetedza & Kuchengetedzeka
Vari VPN zviri Pamutemo here? Nyika Dzinorambidza VPN Kushandiswa
Maitiro Ekuseta VPN: Iyo-Famba-kuburikidza neRinotungamira
Nzira yekuvanza kana kuchinja yako IP kero?
VPN Reviews: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / TorGuard
Zvinyorwa Zvinozivikanwa (2020)
Yakawanda Zvakadii Kubvumidza Bhendi Iwe Unodei?
Nzira Yokusviba Nayo Webhusiku Ichishandisa TOR Browser
Nzira Yokutanga Nokudzinga Forum Forum
Nzira yekufambisa Yako Webhusaiti kune Imwe Webhu Yekutambira
Rwokutanga Rwokutengeserana Kwebhizimusi Mazano Kuti Uite Iwe